Jose Mourinho oo dalbaday Lacag soona bandhigay Cayaartoyda uu donayo bisha Janaayo? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Jose Mourinho oo dalbaday Lacag soona bandhigay Cayaartoyda uu donayo bisha Janaayo?
(08-10-2018) Macalinka Cadaadisku Saaranyahay ee Manchester United Hogaamiya Jose Mourinho ayaa lasheegayaa in uu dalbaday lacag uu bisha Janaayo kula soo wareego daafac wanaagsan isaga oo soo bandhigay Magacyada 2 Xiddig oo uu midkood doonayo.
Jose Mourinho oo ku kalsoon in uu sii ahaan doono Macalinka Manchester United ayaa doonaya in lasiiyo Lacag fara badan oo uu ku galo suuqa marka uu dib u furmo bisha janaayo 2019.
Mourinho ayaa dhibaatada ugu weyn ee haysata kooxdiisa u arka in ay tahay dhanka daafaca waxaana uu diirada saartay laba daafac midkood in uu lasoo wareego kuwaas oo kuwada sugan Magalaada Milano ee dalka Talyaaniga.
Xiddigaha uu doonayo Jose Mourinho ayaa kala ah Milan Skriniar oo Inter Milan u Cayaara iyo daafaca dalka Talyaaniga ee lagu Magacaabo Alessio Romagnoli 00 AC Milan katirsan waxaana warkaan daabacay Wargeyska ESPN FC.
Manchester united Macalinkeeda ayaa xiligaan suuqa geliyey £68m oo uu kula soo Saxiixday Cayaartoyda Fred, Diogo Dalot iyo Lee Grant kuwaas oo qaban shaqadii looga baahnaa sidoo kalana maanuu soo qaadan daafac dhexe oo uu in badan doon doonayey markii uu garab ka waayey Maamulka Naadigiisa sida uu sheegay waana halka hada dhibku ka haysto Man united sida uu aaminsanyahay.